Fahazoana Rano Fisotro : Fifaninanana Iraisampirenena Famoronana Lahatsary ho an’ny “One Take” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2018 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
“Zo fototra amin'ny maha-olombelona ve ny fahazoana rano fisotro madio sy azo antoka? Nahoana? Na maninona no tsia?”
Toy io no fanontaniana atolotry ny One Take [ang] ho valianareo amn'ny fiteninareo, amin'ny alalan'ny fandraketana lahatsary iray manana faharetana 2 minitra raha be indrindra, apetraka ety anaty tambajotra ao amin'ny tranonkalan-dry zareo na ny DotSub, ary asianareo dikanteny aminà tenimpirenena iray hafa raha kely indrindra. Ny volana Martsa 2009, nihaona tao Istanboul, ao Tiorkia ireo mpitarika erantany, tao amin'ny Vovonana iraisampirenena momba ny rano mba hifanakalo hevitra momba io fanontaniana io, ary raha toa ny sasany mino fa ny rano dia tokony heverina ho filàna fototra fa tsy zo fototra, ny hafa indray, izay nahitàna an'i Etazonia, Shina, Kanadà, dia tsy mihevitra azy io ho tokony heverina ho toy ny zo fototra maha-olombelona. Fotoana ho antsika ny toy izao hanehoantska ny hevitsika momba io lohahevitra io, sy hanaovana izay handrenesana ny feontsika.
Ny 15 Aprily hatramin'ny 15 Jona, azo natao ny nametraka ny fandraisana anjara, izay noferana ho iray isanolona, mba hanànana vintana hivoaka ho mpandresy amin'ireo loka telo atao tolobola : 500 dolara amerikàna ho an'ny Loka Goavana, 300 ho an'ny faharoa, ary 300 ho an'izay lahatsary nahavita nanao ny azy hisy dikanteny amin'ny tenimpirenena maro indrindra.
Ireo masontsivana nitsaràna ny mpandray anjara dia : ny hazavàn'ny feo sy ny sary; ny hatsaran'ny soratra, ny hatsaran'ny fanononana ho an'ny fanehoankevitr'olontokana manoloana ny fakàntsary, ny hafanampo sy ny herim-pientanana momba ilay lohahevitra ary ny fisian'ny endrika fahaizana mamorona zavatra vaovao.
Tato ny lahatsary iray napetraka tao amin'ny tranonkalan-dry zareo mba hanehoana ny karazana fanolorana notadiavina :
Raha toa ianareo liana te-hahafantatra momba ireo olana mifandraika amin'ny rano, dia tolokevitra aroson'ny bilaogy “the World's Water” ny hijerenareo ilay fanadihadiana novokarin'i Irena Salina : FLOW. Mampiasa ohatra avy any India, Bolivia ary ireo firenena ao Eoropa sy Etazonia ilay fanadihadiana, mba hampitàny ny hafatra : raha toa àry ka mila rano mba hahafahany mivelona ny olona tsirairay (sady izao koa e, 75% amin'ny vatantsika dia rano), maninona ny rano no voatokana ho an'ireo afaka mandoa vola fa tsy ho an'ireo izay rehetra mila azy ?
DotSub dia vondrom-piarahamonina fandikàna teny sy fametrahana dikanteny. Azon'ny rehetra atao ny mametraka fandikàna amin'ireo lahatsary ao, ary azonareo adika ny lahatsarin'ny hafa raha izay no fanirianareo. Ho fanombohana, mila fotsiny mametraka lahatsary iray ao, miaraka amin'ny fandikàna an-tsoratra ny tenimpirenenao ao amin'ilay tranonkala. Mipoitra ho azy eo amin'ilay lahatsary izay fandikàna vita. Kanefa, ho an'ity fifaninanana ity, ankoatra ny fandikàna an-tsoratra nataonao, dia tsy maintsy ampanarahanao koa ny dika aminà tenimpirenena iray hafa. Raha manapaka hevitra ny handray anjara amin'nilay fifaninanana ianao, dia mametraka fanehoankevitra ao amin'ny lahatsoratra niandohana nakàna ily lahatsoratra ity, dia atao ny fanamarinana !
(Fanamarihana avy amin'ny mpandika: lahatsoratra nivoaka tamin'ny taona 2009 ity nadika ity. Misy amin'ireo rohy ato anatiny no efa tapaka, misy ny zavatra efa nosongonan'ny toetrandro aza, saingy nadika ihany ho any mpamaky ny Global Voices Malagasy, noho izy misy hevitra mahaliana na tantara tokony ho fantatra)